Semalt: Ihe omimi nke nyocha nke a ga-eme ka ndi ahia karia
N'ụbọchị ndị a, ezigbo ndị ahịa na-achọ ntanye ziri ezi na ego efu, na-enweghị nkwenye na mma na ntụkwasị obi. Ozugbo ị malitere ịchọta data n'ịntanetị, ihe ga-emeghere na-akpaghị aka. Ọ dị mma ịsị na ntụgharị ọchụchọ dị omimi nwere ike ịchọta ọtụtụ ndị ahịa. Nke ahụ bụ n'ihi na, ya na ya, ị ga-enwe ike ịma ihe ndị ahịa gị na-achọ na otu esi enweta ihe ha tụrụ anya ya. Ọ bụ ezie na ịchọrọ ugwo mkpọsa dị mkpa, nchọpụta nchịkọta miri emi nwere ike ịbara gị uru n'ọtụtụ ụzọ. Ọ nwere ike ime ka ndị ọbịa gị ghọọ ndị ahịa wee nwee ike inye aka mee ka ahịa gị dị ukwuu - внешняя точка доступа.
Jason Adler, Njikwa Ihe Nlekọta Ndị Ahịa nke Semalt , na-ekwuputa ebe a isi okwu dị mkpa maka ị ga-enwe ọganihu n'usoro nyocha ọchụchọ
Nke mbụ, ị ga-enyocha ma nyochaa isiokwu gị iji chọpụta ma ọ dị mma ịga na ma ọ bụ. Ọ dị mkpa ka anyị niile mee ndepụta nke isiokwu ndị nwere ike ịba uru na ụlọ ọrụ anyị. Dị ka engines ọchụchọ na-agbasi mbọ ike iji kwụọ ụgwọ ndị na-akwụ ụgwọ, n'ihi ya, ị ga-eche banyere nke ahụ ma mara ihe ga-esite na ya ma chọpụta ihe kachasị. , na ohere ị ga-enwe inwe ọganihu dị elu na ịntanetị, ị ga-enyocha mgbe niile iji chọpụta otú ị ga-esi azụ ahịa gị ma nweta ọtụtụ okporo ụzọ. Site na mkparịta ụka, ị nwere ike ime ka ọtụtụ ndị ọzọ gaa na saịtị ma ọ bụ na-elekọta gị profaịlụ mgbasa ozi, soro ihe ndekọ ha gara aga ma mee ka ha banye na ngwaahịa gị na ọrụ gị. Ọtụtụ n'ime anyị anaghị eleghara nchọpụta isiokwu anya mgbe ị na-eme ihe ndị a, mana ị gaghị eleghara ya anya ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgba ọsọ na ịzụ ahịa gị na ịntanetị.)
Mara Ndị Mmadụ Ị Na - eche
Ị nwere echiche nke ndị na-ege gị ntị? Mara ndị ị chọrọ ịlele na ọnọdụ ha. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị bụ onye na-ede blọgụ, na-edere ndị Asian akwụkwọ, mgbe ahụ o doro anya na ndị na-ege gị ntị ga-ebi na India, Pakistan, China, Thailand, na mba ndị ọzọ yiri ya. SEO bụ ụzọ magburu onwe ya ịmara onye ị ga-eleba anya na otu esi eji okwu na ahịrịokwu kwesịrị ekwesị na nke a. Jiri ohere na nzaghachi nke ndị ọkachamara wee mụta otú ndị ahịa gị ga - esi meghachi omume na ngwaahịa gị na ọrụ gị.
Gaa na-agafe ihe gbasara ihe ndị ọzọ
Ị ghaghị ịgabiga ihe eji emepụta ihe eji eme ihe iji mee ka ọrụ gị rụọ ọrụ nke ọma. Ọ bụ iwu na ị hụrụ ngwá ọrụ nyocha data ma jiri ọtụtụ n'ime mmemme ahụ chọọ isiokwu. Ọ bụghị naanị isiokwu dị iche iche kamakwa ahịrịokwu na okwu ndị dị mkpa ga-eji mee ka ọrụ gị rụọ. I kwesịghị ichefu ihe ndị a na-adịghị ahụ anya nke nwere ike inyere gị aka imeta ihe ndị a chọrọ n'ime izu ole na ole. Dịka ọmụmaatụ, e mepụtara Demographics Pro iji nye ndị ọrụ echiche nke onye na-achọ ngwaahịa ha na otu esi achọta ụdị ahịa dị mma na ịntanetị. E nwere ọtụtụ ngwá ọrụ dị otú ahụ a pụrụ iji mee ka ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị mmadụ nwee ike ime ihe. Ngwaọrụ ndị a na-etinye gị na egwu kwesịrị ekwesị, ị nwere ike mfe ịchọta okwu na isiokwu nke ndị ahịa gị nwere ike ịmasị.